Ciidamada sida gaarka ah u carbisan ee DANAB oo sii kordhaya. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidamada sida gaarka ah u carbisan ee DANAB oo sii kordhaya.
Ciidamada sida gaarka ah u carbisan ee DANAB oo sii kordhaya.
Taliska Xoogga dalka oo sanadihii dambe dib u qaabeyn iyo tayaynta ciidamada xoogga dalka si xooggan u waday ayaa sii kordhiyay, lambarka ciidamada gaarka u carbisan ee DANAB isla markaana abuuray Talis u gaar ah. Ciidamadani ayaa horay u ahaa Urur gaar u taaggan oo aan ka mid aheyn guutooyinka uu’ u qeybsan yahay xoogga dalka.
Ciidamada kumaandooska ah ee DANAB ayaa la gaarsiiyay Guuto halkii ay horay u ahaayeen Urur taas oo ka dhigan in Urur kale lagu sii kordhiyay isla markaana loo asteeyay magac u gaar ah taas oo ah Guutada 16-aad ee DANAB.
DANAB ayaa laf-dhabar u aheyd guullo dhowr ah oo laga gaaray howlgallo ka dhacay qeybo ka mid ah gobollada dalka kuwaas oo ahaa kuwa toos ah iyo kuwa si dadban ay u fuliyeen, Guutada 16-aad ee DANAB waxaa hoggaamin doona oo loo magacaabay Gaashaanle Ismaaciil Cabdi Maalik oo waxbarasadiisa heerka jaamacadeed kusoo qaatay Dalka Malesia, sidoo kalane kasoo qalin jabiyay Kuliyad dhinaca howlgalinta ah ee ku taalla dalka Maraykanka.
Previous articleGolaha shacabka oo ansixiyay xisaab xirka miisaaniyaddii 2017-ka.